सत्ता समीकरणबारे पक्ष-विपक्षमा विभाजित जसपाको पदाधिकारी बैठक बस्दै
काठमाडौं, २९ बैशाख । नयाँ सरकार गठनलाई लिएर विभाजित देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पदाधिकारी बैठक बस्दै छ ।आज बुधबार बस्ने जसपाको पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक संकटबारे छलफल हुने र निकास खोजिने बताइएको छ ।
जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशमा विद्यमान स्वास्थ्य एवम् राजनीतिक संकट समाधानका लागि नयाँ सुत्र प्रस्तुत गरेलगत्तै जसपाको पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको हो ।डा. भट्टराईले आजै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुराकानी गर्ने र त्यसपछि पदाधिकारी बैठक बस्ने जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
आज नै डा. भट्टराईले अहिले पक्ष विपक्षमा बाँडिनेभन्दा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सबै दलको सहभागितामा नयाँ सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उक्त सरकारमा सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र वर्तमान प्रधानमन्त्री सहभागी हुन नहुने उनको बुझाई छ । उक्त सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्ने तर्क उनले गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनबारे पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएको जसपामा प्रस्ट दुईवटा धार देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेकको सरकार गठनका लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको अडान छ । तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेता भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीclose
बर्षाले रोकेन ओली र महतोको पुत्ला दहन
अदालतको फैसलापछि ओलीले बोलाए स्थायी कमिटी बैठक